‘असल र सो’झा के’टाहरुले मा’त्र कि’न प्रे’ममा धो’का पाँ’उछ’न ? था’हा-पा’उनुहोस्” – Sudur Samaj
‘असल र सो’झा के’टाहरुले मा’त्र कि’न प्रे’ममा धो’का पाँ’उछ’न ? था’हा-पा’उनुहोस्”
भनिन्छ सोझै रुख सदैव पहिला नै काटिन्छ । प्रेममा पनि यही नियम लागु हुन्छ किनकी असल र सोझा केटाले मात्र बढी प्रेममा धोका खाने गर्छन ।
प्रायः खराब केटाले असल जीवन साथी पाउँछन् र यस्ता केटाका साथ धोका हुन्छ जसले भित्री हृदयदेखि नै प्रेम गर्छन । त्यसो भए असल र सोझो हुनु के पाप हो त ? अवश्य पनि हुन सक्दैन ।भनिन्छ प्रेममा धोका हुँदैन । धोकामा पो धोका हुन्छ। प्रेममा त प्रेम नै हुन्छ। धोका भयो भने त्यो प्रेम होइन, जाल मात्र हो । प्रेममा मिसावट हुँदैन, मिसावट भएको प्रेम हुँदैन।
प्रेम शुद्ध हुन्छ। आजकाल प्रेम गरिन्छ र गराइन्छ । समयक्रमसँगै विचार र क्रियाकलापहरू बदलिँदै जान्छन् । समयसँगै पहिलेको जस्तो धारणा र सम्पर्कमा कमी आउँदै जान्छ । कसैको प्रेममा फस्नु लागू पदार्थको नसामा धुत हुनु जस्तो हुन्छ । असल र सोझा केटाले मात्र प्रेममा धोका पाँउने कारणहरु यस प्रकार छन्।
५. आवश्यकता भन्दा ज्यादा पार्टनरको ख्याल गर्ने केटा पनि केटीहरुलाई मन पर्दैन । कतिपय अवस्थामा यस्तो ज्यादा वास्ता पनि केटीहरुलाई बंधन जस्तो लाग्छ । हरेक केटी आफ्नो तरिकाले बाँच्न चाहन्छन् । केटीहरुलाई माया, प्रेम त चाहिन्छ तर, आवश्यकता भन्दा बढी भएपछि झर्को मान्छन् र सम्वन्धै तोड्ने वारे सोच्न थाल्छन् । “”””मोडल तथा गायक मीराज कोइरालाको प्रेममा ‘धोकै धोका’ ! (भिडियो)
विश्वकै सबैभन्दा अग्ली भनिएकी रुसी मोडल अग्लो प्रेमीको खोजीमा”